Iindaba-Ngaba iimvavanyo ze-Antibody Inokuba Yenye Yenye okanye Yokuncedisana noGonyo lwe-COVID?
Ngaba uVavanyo lwe-Antibody lunokuba Yenye okanye iThelele isitofu sokugonya se-COVID?
Eli nqaku lilandelayo livela kwiTekhnoloji Networks epapashwe nge-7 kaMatshi ngo-2022.
Njengoko isoyikiso se-COVID sisiya singxamiseka kancinci ngaba lixesha lokuba siqale ukwamkela iindlela ezintsha?
Olunye uluvo oluphononongwayo kukusebenzisa uvavanyo lwe-antibody oluhamba ngasemva ukubonelela ngenye indlela yokupasa kwe-COVID yokwamkela abantu kumazwe, iminyhadala yezemidlalo okanye kwezinye iindibano ezinkulu.
Amanye amazwe sele ezazisile izatifikethi ze-antibody njengezitofu ezilingana nokuvumela abantu abaninzi abakhe bachanabeka kule ntsholongwane ukuba bathathe inxaxheba kuluntu.Kwilizwe laseMelika eKentucky, indlu yowiso-mthetho isandula ukuphumelela isigqibo esichaza ukuba uvavanyo lwe-antibody oluqinisekileyo luya kuthathwa njengolulinganayo nokugonywa.Ingcinga yeyokuba uninzi lwabantu ngoku luya kube luvezwe kwi-COVID, kwaye ke amajoni abo omzimba aya kusazi esi sifo.
Ubungqina bamva nje bubonisa ukuba usulelo lwendalo lwe-COVID-19 lubonelela ngokhuseleko ngokuchasene nokosuleleka kwakhona, kwaye kwezinye iimeko lulingana nolo lunikezelwe ngogonyo.Okukhona umntu enazo izilwa-buhlungu, kokukhona enokhuseleko olungakumbi kwintsholongwane ekuhambeni kwexesha.Ke ngoko, ukwenza uvavanyo lokuqukuqela olusecaleni olubonisa ukubalwa kwe-antibody kuya kubonisa ukuba kunokwenzeka kangakanani ukuba umntu abambe i-COVID-19 kwaye ayisasaze kwabanye abantu.
Ukuba isisombululo saseKentucky samkelwe, abantu baya kuthathwa njengokufana nokugonywa ngokupheleleyo ukuba iziphumo zabo zovavanyo lwe-antibody zibonise inqanaba eliphezulu ngokwaneleyo lokungathinteli izilwa-buhlungu - ngaphezulu kwepesenti ezingama-20 zabantu abagonyiweyo.
Umzekelo wamva nje ngumqolo womdlali wentenetya kwisitofu sokugonya sikaNovak Djokovic kunye nokungena kwakhe e-Australia.Ezinye izazinzulu ziye zaxoxa ukuba ukuba u-Djokovic ebenayo i-COVID-19 ngoDisemba, njengoko ebanga, uvavanyo lwe-antibody belunokufumanisa ukuba une-antibodies eyaneleyo yokubonelela ukuxhathisa intsholongwane kwaye imthintele ukuba ayisasaze ngexesha le-Australian Open.Oku kunokuba ngumgaqo-nkqubo wokuqwalasela ukuphunyezwa kwimisitho emikhulu yezemidlalo kwixesha elizayo.
Ngaphezu kokudlula kwi-COVID
Uvavanyo lwe-antibodyineengenelo ezingaphaya kokuba lolunye uhlobo lokupasa kwe-COVID.Abaxhasi bayo eKentucky bathiIsenokonyusa ugonyo lwe-booster kurhulumente ukuba abantu bafumanisa ukuba abanawo amanqanaba aphezulu ngokwaneleyo e-COVID antibodies.
Naphakathi kwabo bagonyiweyo, uvavanyo lunokuba luncedo.Abantu abanamajoni omzimba abuthathaka, nokuba kusebudaleni, imeko yezonyango, okanye amayeza, baya kuba nomdla ngakumbi wokujonga ukuba amajoni abo omzimba asabele kwisitofu sokugonya.Kwaye,njengoko isitofu sokugonya sisihla ngokuhamba kwexesha, abantu banokufuna ukwazi ukuba lungakanani na ukhuseleko abanalo, ingakumbi ukuba sele kulithuba elide bebenejab.
Kwinqanaba elikhulu, uvavanyo lwe-antibody lunokuba nefuthe kwimpilo yoluntu, luvumela abasemagunyeni ukuba balandele umyinge wepesenti yabantu abaye bachanabeka kule ntsholongwane.Oku kunokuba luncedo ngakumbi xa isiphumo sesitofu sokugonya siqalisa ukuncipha, esinokuthi sibe malunga neenyanga ezine emva kwethamo lesithathu okanye “lokukhuthaza”.Oku kunokunceda abasemagunyeni bathathe isigqibo sokuba ngaba amanyathelo athile okhuseleko kufuneka angeniswe.
Ukufakwa kwedatha kuya kuba ngundoqo
Ukuze uvavanyo lwe-antibody oluqukuqelayo lusebenze, nokuba lukwinqanaba lomntu okanye kwiqela elikhulu, iziphumo zovavanyo kufuneka zirekhodwe kwaye zigcinwe.Eyona ndlela ilula yokwenza oku kukusebenzisa i-app yefowuni ephathwayo ebamba umfanekiso wesiphumo sovavanyo kunye nedatha yesigulana esihambelanayo (iminyaka yobudala, isini njl.njl.) kunye nedatha yokugonya (umhla wogonyo, igama lesitofu njl.njl.).Yonke idatha inokufihlwa kwaye ingaziwa kwaye igcinwe ngokukhuselekileyo efini.
Ubungqina besiphumo sovavanyo olunexabiso le-antibody lunokuthunyelwa nge-imeyile kwisigulane ngokukhawuleza emva kovavanyo, kunye nembali yovavanyo egcinwe kwi-app apho inokufikelela khona ngoogqirha, oosokhemesti, okanye, ukuba kwindawo yokuvavanya indawo yokusebenza, umqhubi wovavanyo.
Kubantu ngabanye, idatha inokusetyenziselwa ukubonisa ukuba banenqanaba eliphezulu ngokwaneleyo le-antibodies ukubanika ukhuseleko kusulelo lwe-COVID-19 kunye nokuthintela ukusasazeka kwale ntsholongwane.
Kwinqanaba elikhulu, idatha inokuthi ingaziwa kwaye isetyenziswe ziiarhente zempilo zoluntu ukujonga ukusasazeka kobhubhane kwaye zibavumele ukuba baphumeze amanyathelo kuphela apho kukho imfuneko, ukunciphisa ifuthe kubomi babantu kunye noqoqosho.Oku kuya kunika izazinzulu ulwazi olutsha oluxabisekileyo malunga nentsholongwane kunye nokungakhuseleki kwethu kuyo, ukonyusa ukuqonda kwethu i-COVID-19 kunye nokubumba indlela yethu yokuqhambuka kwezifo kwixesha elizayo.
Masihlole kwakhona kwaye sisebenzise izixhobo ezitsha esinazo
Uninzi lwezazinzulu kunye neengcali zempilo yoluntu zicebisa ukuba sijonge kwinqanaba lesi sifo, apho i-COVID iba yenye yeentsholongwane ezijikeleza rhoqo eluntwini, ecaleni kweentsholongwane ezibandayo kunye nomkhuhlane.
Amanyathelo anje ngeemaski kunye nokuphumelela kogonyo kuyapheliswa kwamanye amazwe, kodwa kwiimeko ezininzi - ezinje ngohambo lwamazwe ngamazwe kunye neminyhadala ethile emikhulu - kusenokwenzeka ukuba zihlalele ikamva elibonakalayo.Kodwa, ngaphandle kokuqaliswa ngempumelelo kusekho abantu abaninzi abaya kuthi ngenxa yezizathu ezahlukeneyo bangagonywa.
Ngombulelo kutyalo-mali olukhulu kunye nokusebenza nzima, uninzi lwetekhnoloji yovavanyo olutsha kunye nolutsha oluphuhlisiwe kule minyaka mibini idlulileyo.Endaweni yokuxhomekeka kugonyo, izithintelo zentshukumo kunye nokuvalwa, kufanele ukuba sisebenzise olu xilongo kunye nezinye izixhobo ezizezinye esinazo ngoku ukusigcina sikhuselekile kwaye sivumele ubomi buqhubeke.
Ixesha lokuposa: Mar-14-2022